Yusuf Garaad: Aaska Cabdullaahi Ciise 1988 - Qeybta Koowaad
Inta aan taariikhda ku hayo waxay ahayd markii ugu horreysay ee meel maxfal ah uu Maxamed Siyaad isaga oo Madaxweyne ah uu la soo istaago Madaxweynihii koowaad ee Soomaaliya, Aden Cabdulle Cusmaan.
Waa Qabuuraha Qaranka oo ahaa meel ka soo horjeedda Tiribuunka. Waa aaskii Cabdullaahi Ciise, oo ahaa halgamaa Gobannimo doon ah, isla markaana hoggaamiye u ahaa Xukuumaddii Daakhliga ahayd.
Waa ninkii ay Soomaalidu u dirsatay Qarammada Midoobay magaalada New York si uu qaddiyaddooda u daafaco.
Waa ninka markii Talyaanigu yiri waa in lagu tallaalaa si aad buug caafimaad u qaadato marka aad aadeyso New York sy Soomaalidu ka baqday in la sumeeyo ama ugu yaraan uu ku qandhado tallaalka. Halgamaa Maxamuud Yusuf Muro oo ay isu ekaayeen Cabdullaahi Ciise ayaa noo sheegay in uu isagu qaatay aqoonsigii Cabdullaahi oo uu magaca Cabdullaahi isku soo tallaalay una bareeray khatarta looga baqay Cabdullaahi Ciise.
Muro waxaa uu hadalkaa noo sheegay mar isaga iyo halgamayaal kale oo SYL u badan la keenay Jaamacdda oo ay nala hadleen annaga oo markaa arday ah.
Muro waxaa uu Cabdullaahi Ciise sidaa ku guddoonsiiyay buuggii caafimaadka isaga oo aan la tallaalin oo ka bedqaba khatarta lagu tuhmay tallaalka.
Naftii-hure Muro waxaa iigu dambey
Naftii-hure Maxamuud Yusuf Aden Muro
say isaga oo waayeel ah oo xanuunsan. Dadkii i dhihi jiray dadku inta ay nool yihiin waa in wanaaggooda la sheego si loogu qiro ama looga abaalmariyo, waa runtood, waxaan ku xujeysanayaa sida ay u qiimeeyaan Muro.
Cabdullaahi Ciise waa ninka ilaa beri dhow aan London ku arki jiray niman badmaax ah oo ku faana in ay ka mid yihiin Soomaalidii London ku soo dhoweysay kuna jiscintay Cabdullaahi Ciise.
Markii ay gobinnimada qaadatay, Soomaaliya waxay Cabdullaahi Ciise u magacwday Wasiirkeeda Arrimaha Dibadda ee ugu horreeyay.
Waa 1988. Galabta waxaa fagaaraha loo taagan yahay aaska Cabdullaahi Ciise.
Maxamed Siyaad wuxuu soo gaabiyay safar uu dhib kala kulmay oo uu ku marayay Gobollada woqooyi ee dalka. Wuxuu Madaxweynuhu wajahay Rabshado iyo kar aanuu hore ugala kulmin woqooyi. Dabcan karkaasi wuxuu marayay meeshii ugu dambeysay inta aanuu qarxin isla sannadkaas gudihiisa. Madaxweyne Maxamed Siyaad wuxuu toos ugu soo duulay Muqdisho si uu goobjoog uga ahaado aaska.
Ummad aad u fara badan ayaa isugu soo baxday xabaalaha. Qaar waxay daba socdeen baabuurka meydka sida. Annaga oo koox weriyayaal ah ayaan dusha ka saaran nahay baabuur siible ah oo dhigo leh.
Qaar kale waxay sii joogeen qubuuraha. Dadka qaarna marka ay arkeen aaska sida weyn loogu soo baxay ayay iyaguna ku biireen dadka xabaasha tuban.
Madaxweynaha waxaa dhinacyada ka taagnaa ragga ugu dhowdhow ee isaga ku soo xiga. Meel aan ka fogeyn oo isla safka hore ah kuna beegan Madaxweynaha Garabkiisa midig ayaa waxaa taagan Madaxweynihii koowaad ee Soomaaliya, Aden Cabdulle Cusmaan.
Aden-Cadde in badan ayay soo wada shaqeeyeen Cabdullaahi Ciise. Markii uu Cabdullaahi madaxa u ahaa Xukuumadda, Aden-Cadde wuxuu ahaa Guddoomiyaha Baarlamaanka.
Kama badna laba ama saddex dadka labada Madaxweyne u dhexeeya. Ma arkayn anigu markii hore sida ay labadoodu isu salaameen ama loo soo dhex galay, laakiin waxaan si wanaagsan u xusuustaa markii la aasay meydka wixii dhex maray Madaxweyne Maxamed Siyaad iyo Madaxweyne Aden-Cadde.
Waxaa la keeny xirmo ubax ah oo lala soo hor istaagay Madaxweyne Maxamed Siyaad si uu qabriga u dul dhigo. Muu qaban ubaxa. Isaga oo gacanta Midig ku soo taagaya ayuu yiri u dhiiba Adan.
Markiiba Adan-Cadde wuu ka cudur daartay, isaga oo gacnahana ka taagay si maya ah. Maxamed adigu qabo, adigaa xilka hayee, ayuu ku yiri cod aad u culus oo lagu yaqaannay Aden-Cadde lagana yaabo in murugada geerisu ay uga sii dartay.
Qof kale ayaan codkiisa maqlay. Wuxuu yiei maad isla qabataan. Qof kalena wuu ku celiyay erayadaas.
Markaas ayaa Maxamed Siyaad uu ubaxa dhinac qabtay, durba soo eegay Aden-Cadde isaga oo ku marti qaaday in uu dhinaca kale qabto.
Halkaas ayay Maxamed Siyaad iyo Aden-Cadde wadajir ubax u dul dhigeen qabriga Cabdullaahi Ciise. Saddexdaba Allah ha u naxariisto.
Posted by Yusuf Garaad at 15:14:00